Soomaaliya: Oo haysa dhabbada Nabadda iyo Xasiloonida
Waxaa qoray Francisco Madeira
Maanta, dunida ayaa Soomaalida la wadaagaya u-dabaal degidda sanad-guuradii madax-bannaanida 56aad ee dalka, waxaan anigoo kalsooni qaba dhihi karaa, in ujeedada Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) oo ah in la carqaladeeyo, la duleeyo, lana baabbi'yo Al-Shabaab si loo xasiliyo dalka ,inta badan waa lagu guuleystay.
Al-Shabaab ayaa isagu uruuray aag yar ee koonfurta Soomaaliya. AMISOM waxay ku qaadi doontaa weerarkii ugu dambeeyay si loo baabi'iyo xagjiriinta isla markaana dadweynaha loogu ogolaado in ay raacdaan noloshooda si xor ah, ammaan ah, kalsooni ku jirto, ay ku raaxeystaan miraha xornimada oo ay kasbadeen 56 sano ka hor, markii calanka Soomaaliya la suray markii ugu horeysay oo astaan u ahayd dhammaadka xilligii gumeysiga.
Ma aha oo kaliya dhinaca milatari in aanu ka shaqaynayno, AMISOM ayaa taageero iyo dhiiri galin siinaysa hanaanka siyaasadeed ee wada hadal loo dhan yahay iyo dib u heshiisiin. Waxaa mudnaanta la siinayaa xasilinta iyo kor-u qaadida tayada hay'adaha dawladda si ay cagahooda dib uga istaagaan isla markaana hawlahooda u gutaan.
Muqdisho, oo horaan gacanta Al-Shabaab uga jirtay balse AMISOM ayaa kala wareegtay, ayaa hadda ah magaalo cammiran. Bishii November ee la soo dhaafay , shirkadda Maraykanka ee Demographia, oo soo saarta warbixin sanadle ah ee qiimaysa horumarka deegaanada iyadoo loo marayo saadaasha dadweynaha adduunka Qaramada Midoobay 2010 - 2020', ayaa sheegtay in Muqdisho ay gashay kaalinta labaad ee caasimadaha ugu kobaca badan ee adduunka.
Isla mar ahaantaana, hay'adaha kale ee muhiimka ah ee dawladda ayaa abuurmaya isla markaana saamayn ku yeelanaya nolosha dadka Soomaaliyeed. Waaxda ururinta dakhliga ayaa la aasaasay oo bilaabay cashuur uruurinta, Bangiga Dhexe ayaa wuxuu meel marinayaa tallaabooyin maaliyadeed iyo sharciyaynta dhaqaalaha. Sidoo kale waaxda socdaalka ayaa si muuqata looga dareemayaa horumarinta adeegyada. Bangiga Adduunka ayaa wakiil u magacaabay dalka Soomaaliya halka Hay'adda Lacagta Adduunka ee sanadkii hore ay dib u-eegis ku sameysay dhaqaalaha dalka markii ugu horeysay 25 sano kadib. Sidaas darteed, ma aha la yaab in dhaqaalaha Soomaaliya uu kordhayo heerka boqolkiiba 5 In ka badan, taasoo sabab u ah kor u kaca dhismaha iyo waaxda adeegyada.
Tani ma aha xiliga quursashada. Hadda waa waqtiga u dulqaadashada iyo qaadashada go'aanka adag ee baabbi'inta Al-Shabaab, in la midoobo lana taageero Soomaaliya si ay u guuleysato.
Francisco Madeira waa Wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika ee Soomaaliya iyo madaxa Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya.